The Irrawaddy's Blog: ကိုးဘွဲ့ရ အရှင် အာစာရာလင်္ကာရ စစ်မေးခံနေရ
ကိုးဘွဲ့ရ အရှင် အာစာရာလင်္ကာရကို ရန်ကုန်တိုင်း သံဃမဟာနယကအဖွဲ့က ခေါ်ယူစစ်မေးမှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း သိရသည်။
အရှင် အာစာရလင်္ကာရကို မာတုဂါမအမှုတခုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပတ်ခန့်မှ စတင်ကာ တိုင်းသံဃမဟာနယကအဖွဲ့က ခေါ်ယူစစ်မေးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ လတ်တလောအားဖြင့် တရားဟောခွင့် ပိတ်ပင်ထားကြောင်း နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့ဝင် ဆရာတော်တပါးက မိန့်ကြားသည်။
တရားဟောပြီး မတရားလုပ်နေတာမှန်ရင်တော့ သာသနာတော်နှင့်
ဓမ္မကထိကဆိုတော့ လက်ထဲငွေရွှင်တယ်လေ၊ အမတွေကလဲ အပျိုအအိုအစုံပေါ့လေ သူ့ကို ကပ်ကြတာဘဲ။ အာစာရလဲ ဘာအသားနဲ့ထုထားတာမို့လဲ။ စစ်ကိုင်းတောင်သော်မှ ဧရာဝတီရေ တိုက်ပါများတော့ တောင်ခြေ ကျွေရသေးတာဘဲ။ ပါဠိစာပေထဲမှာဆို ရဟန္တာသော်တောင်မှ တက်ခွခံရသေးတာ။ အာစာရလောက်ကတော့ အဟင့်ဘုန်းဘုန်း သမီးကို မုန့်ဖိုးပေးအုန်း ဆိုယင် ရှိသမျှမှုန့် ကျွေးတော့မှာပေါ့။ အကျွေးလွန်သွားတာနေမှာပေါ့။ ဘယ်သူမှားမှား လွန်ကျူးမိယင်တော့ သာသနာ့မျက်နှာကို ငဲ့ကွက်ပီး ဂျာကင်နဲ့ဂျင်းဘောင်ဘီသာ ၀တ်လိုက်ပါတော့ကွာ။ သူလိုကိုယ်လို အများကြီး စားနိုင်တာပေါ့။
H.S said... :
MR ANONYMOUS , I LIKED YOUR COMMENTS BEFORE.NOW YOU ARE NOT NICE. IF YOU DO NOT KNOW SURELY , YOU CANNOT COMMENT LIKE THAT. IF YOU SEE YOUR SELF, IT IS OK. PLS CONTROL YOURSELF. I SAW YOUR COMMENTS SO MANY . I LIKE IT BUT SOMETIMES YOU ARE NOT UNDER CONTROL .PLS!
အင်း ဒါမျိုးတွေက ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်တွေပါ။ ဘုရားရှင်လက်ထက်မှာသော်မှ ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေ အများကြီး တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်မကျေနပ်တဲ့ကိုယ်တော်ဆိုရင် ဒီလို ရင်ဖွင့်နေတာ သိပ်တော့ မဆန်းတော့ပါဘူး။ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာ အမှားမကင်းတတ်ပါဘူး။ သံဃာဆိုရင်တော့ အမှားမရှိ ပကတိစင်ကြယ်ပါတယ်။ ကိုးကွယ်နည်းတတ်ရင် အကျိုးရရှိနိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆိုရင် သင်္ကန်းစလက်ပတ်ထားတဲ့သူကို ကိုးကွယ်ရတော့မှာတဲ့။ အခု သင်္ကန်းအစုံမြင်ရပါသေးတယ်။ သာသနာတော်ကြီးတည်တံ့ဖို့ဆိုတာ ဆရာ ဒကာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံး တာဝန်ရှိပါတယ်။ တခြားဘာသာတွေ စည်းလုံးနေတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ဘာသာကလည်း ညီညွတ်နေမှ အဆင်ပြေမှာပါ။ အဆင်ပြေခိုက် ကောင်းတယ် ဟုတ်တယ်ပြောလိုက်နဲ့..
အဆင်လည်းမပြေရော ဟိုပြောလိုက်ဒီပြောလိုက်ဆိုရင်...သူများဘာသာတွေက အထင်တသေးနဲ့ ရယ်သွေးကြမှာပေါ့။
ဘယ်ကိစ္စမဆို မသေချာဘဲ မဆုံးဖြတ်သင့်ပါဘူး။ ဆရာတော် ဟောထားတဲ့ တရားများကိုလဲနာကြည့်သင့်ပါတယ်။ လောကမှာ ကြိုက်သူ ၅၀၊မုန်းသူ ၅၀ ဆုိုတာ ကုို လဲ သတိရသင့်ပါတယ်။မသေချာဘဲ အထင်နဲ့ရမ်းပြီး ပြောနေကြရင် အလကားနေ အကုသိုလ်ဘဲများမှာပါ။
ဆရာတော် တရားဟောတဲ့ တရားတွေနဲ့ ရင်အေးသွားတဲ့သူတွေအတွက်တော့ ဓမ္မ (အနုပညာ) ကိုခံစားတယ်ပေါ့၊
ဆရာတော်ကို အပြစ်မြင်တာကတော့ (ပုဂ္ဂလ-ပုဂ္ဂိုလ်ရေး)ကို ခံစားတယ်ပေါ့။
သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ လို့ ဆိုနေတာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးထင်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနဲ့ သူ့ရဲ့ အနုပညာကိုတော့ ခွဲမြင်တတ်ယင်ကောင်းမယ်ပေါဗျာ။ အေအိုင်ဒီဆက်ရောဂါရနေတဲ့ ကင်ဆာပါရဂူဆရာဝန်တစ်ယောက်က သူအဲဒီရောဂါနဲ့ သေမသွားခင် ကင်ဆာရောဂါသည်တွေကို အများကြီးကုသပေးပီးအသက်ကယ်သွားပါတယ်ဆိုယင် ဒီဆရာဝန်ကို ဘယ်လိုမှတ်ချက်ပေးချင်သလဲဆိုတာ သိချင်နေပါတယ်ဗျာ။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနဲ့ လူမှုရေး ( အနုပညာနဲ့ အနုပညာဖန်တီးသူ) ကို ခွဲခြားမြင်တတ်ယင်တော့ အမိမြန်မာနိုင်ငံကြီးအေးချမ်းသာယာမယ်။
အခုမှနိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ ရှိတယ်ဆိုသိရတယ် လွန်ခဲ့တဲ့
၂၀၀၇နှစ်တုန်က ဘယ်မှာသွားနေလည် မသိဘူးနော် အံသြစရာကြီး။
All of above gentle (men or monks), this case are now under investigation, still not sure real or not.So should't be comment like this,still need to wait until result come out.he will get what he done..
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထက် သာသနာရေး လူမျိုးရေးကို ပိုအလေးပေးစေချင်ပါတယ်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝေဖန်နေတာနဲ့ သူများက ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ့်လူမျိုးကို စော်ကားသွားတာ မမြင်မိဘဲ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ သူများဘာသာတွေကြည့်နော်။
အရမ်းစည်းလုံးတာ။ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့ အဲ့ဒီလို မဟုတ်ဘဲ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်နဲ့ အပြစ်တင်ဝေဖန်လေကန်နေကြတယ်။ အဲ့ဒီလိုဖြစ်လေလေ သူတို့အကြိုက် အခွင့်ဘဲပေါ့။
crazy man said... :
comment မပေးပါ ပေးတဲ့သူ ပေါ်အပြစ်ရှိသည်။ ဘုရားရဲ့သားတော် ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
minthant said... :
barmamallochan said... :